မမဝေ – Grab Love Story
မမဝေသည်၊ လှသည်။ ဖြောင့်သည်။ တောင့်သည်၊၊
တိတိကျကျ ဆိုလျှင် ပုရိသယောကျာ်းသားတို့၏ ကာမတဏှာ ကိုကြွစေသည့် အလှမျိုး။
သည်လို တဏှာဆန်သည့် အလှမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သည် မမဝေကို ဇော်ထက်စိတ်ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပစ်မှားခဲ့ဘူးသည် ဆိုတာကို ညင်းနှိုင်စရာ မရှိ။ ဒါပေမဲ့ . . . တနေ့တွင် လက်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်လို့တော့ တခါမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးချေ….
မမဝေက မင်္ဂလာဆောင် တခုသို့ ကားမောင်းပို့ပေးရန် ဖုန်းဆက်၍ ခေါ်ထားသဖြင့် မိုးသည်းသည်း ထဲမှာပင် အရောက်သွားခဲ့ရသည်။
ဇော်ထက် အိမ်ရောက်သွားသောအခါ ဝတ်ကောင်းစားလှများ ဝတ်ဆင်ထားသော မမဝေကို
တွေ့ရသည်၊၊ တံခါးဖွင့်ပေးပြီး တကိုယ်လုံး တုပ်တုပ်နစ်အောင်ရွဲနေသော ဇော်ထက်ကို အဝတ်လဲစေသည်၊၊
အိပ်ခန်း တခုသာပါသော တိုက်ခန်းမို့ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွဲရက်က အိပ်ခန်းထဲမှာဘရှဲိ သည်။ ထို့ကြောင့် မမဝေတို့ အိပ်ခန်းထဲကို သူရောက်ခဲ့ရသည်။
ဇော်ထက် ရေစိုအဝတ်များကို ချွတ်နေစဉ် လူရိပ်မြင်၍ လှည့် ကြည့်လိုက်သောအခါ ရေချိုးခန်း တံခါးဝတွင် မမဝေကိုတွေ့ရသည်၊၊
““အို-ဆောရီး၊ မမ-မင်းအတွက် အဝတ်တွေ လာပေးတာ””
ပါးစပ်က ဆောရီးဆိုသောလဲ၊ မျက်လုံးများက အရောင်လက်နေသည်၊၊
ဇော်ထက်၏ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုသော ကိုယ်ခန္တာတခုလုံးကို မျက်လုံးကစားပြီး ကြည့်လိုက်သည်၊၊ အဝတ်လှန်းယူရန် လက်ကမ်းလာ သောဇော်ထက် ကိုချက်ချင်းမပေးသေးဘဲ- ““ဟင်း…..ဟင်း.. မင်းက အဝတ်အစားနဲ့ ကြည့်တော့ ပိန်သေးသေးလေးလိုနဲ့ ၊ ၊ဗလတွေ ဘာတွေရှိသားဘဲ..”” ဟုပြောသည်။
မမဝေ၏ ရယ်သံသည် ဆည်းလည်း သံလို ချိုသာလှသည်။
ဝေဝေ့ မျက်လုံးများက ဇော်ထက်၏ ပေါင်ရင်းတွင် ရောက်နေသည်၊၊
““ လူနံပိန်… ကျွဲဂျိုလိမ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့”” ထပ်ပြောပြန်သည်။
ဇော်ထက် လိုက်ငုံ့ ကြည့်လိုက်မိသည်၊၊
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်အောက်မှ ဖွားဖက်တော်ကို အမျှောင်းလိုက်ကြီး မြင်နေရသည်၊၊
မမဝေ ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို ဇော်ထက် ချက်ကနဲ သဘော ပေါက်သည်။ ထိုမျှသာမက.. မမဝေ၏ ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေကိုပါ သိမြင်လိုက်သည်။
အဝတ်များကို ဇော်ထက်ထံ ပစ်ပေးပြီး မဝေပြန်ထွက်သွားသည်၊၊
ဒီလောက် အရိပ်ပြလိုကရ်ုံနှင့် အကောင်ကိုမြင်သည်။
တမင်တကာပင် မမဝေ ပွင့်လျက် ထားခဲ့သည့် တံခါးကို အဆုံးထိ ပြန်မပိတ်ဘဲ တထွာလောက် ဟထားလိုက်ပြီး နောက်ဆုံး ကျန်နေသော အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချ လိုက်လေသည်၊၊
တကိုယ်လုံး အဝတ်တမျှင်မှ မကျန်တော့…။
ထို့နောက်.. ရေပန်းဖွားအောက်ကို ဝင်ရပ်လိုက်သည်။ အမွှေးဆပ်ပြာကိုယူ၍ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်တိုက် လိုက်သည်။ သီချင်းတပုဒ်ကို တိုးတိုးညည်းရင်း စိတ်ထဲမှာတော့ မမဝေ အကြောင်းတွေးနေမိသည်။
ဝေဝေသည် ရေချိုးနေသော ဇော်ထက်ကို တံခါးကြားမှ ချောင်းကြည့်ရင်း ဆန္ဒတွေ ထကြွလာသည်၊၊၊ ကိုယ်ခန္တာကတင် ယောကျာ်းပီသတာမဟုတ်၊
တွဲလောင်းကျနေသော တထွာခန့် ပစ္စည်းကြီးကလဲ ယောကျာ်းပီသ လွန်းနေသည်။
ဒီကောင်လေးက သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ယပ်ယပ် နေတတ်ပုံရသည် ဟု ဝေဝေ တွေးရင်း ပြုံးမိသည်။ လူမမြင်သည့် နေရာမျိုးကိုတောင် အသေအခြာ ဖြတ်ညှိထားလိုက်တာ –
အမွှေးတွေက သူ့အတံကြီး၏ အရင်းနားတွင် ခပ်ပါးပါး ခပ်တိုတိုလေးသာရှိသည်။
ရေပန်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်အထက်ပိုင်းကို မျက်နှာသုတ် ပဝုါဖြင့် ရေစင်အောင် သုပ်လိုက်သည်။ ဘယ်ကနေမှန်း မသိနှိုင်သော်လည်း သူ့ကို တနေရာကနေ ဝေဝေချောင်းနေမည် ကိုသိသဖြင့်.. ဇော်ထက်သည် အဝတ်အစားများကို ပြန်မဝတ်သေးဘဲ ခေါင်းကိုချောက်အောင် သုတ်နေလိုက်သည်၊၊
အင်မတန်လှ၍ ယောကျာ်းတို့ ၏ စိတ်ကို လှိုင်းတံပိုး ထစေသော မိန်းမတယောက်က.. အဝတ်အစားကင်းမဲ့နေသည့် သူ့ကို ရင်ခုန်စွာ ချောင်းကြည့်နေသည် ဆိုသောအသိက.. သူ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားလာစေသည်။
ထိုအသိကြောင့်ပင်.. သူ၏ဟာကြီးမှာ တဖြေးဖြေးနှင့် တောင်ထလာလေသည်…။
ကြည့်နေရင်းမှာပင်..မောင်ဇော်ထက်ရဲ့ ရွှေငှက်ပျောသီးက ငေါငေါကြီးဖြစ်လာသည်။
တကယ်တော့ သူဌေး ဦးခင်မောင်မြင့်၏ တိတ်တိတ်ပုန်း မယားငယ်လေး ဖြစ်နေသော်လည်း လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အာသာမပြေသည်မှာကြာပြီ။
ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ ဘယ်လောက်သုံးသုံး အသက်၆ဝကျော် အဖိုးကြီးမို့ အသက်၂၈နှစ်သာ ရှိသေးသော ကျမ်းမာသန်စွမ်းသည့် သူလို မိန်းမပျိုတယောက်၏ စမိလျှင် မုန်တိုင်းထန်သွားတတ်သော ဆန္ဒများကို ကြေနပ်သွားလောက်အောင် ဖြေ့ဆီးပေးနှိုင်ခြင်းမရှိ။
အဆိုးဆုံးကတော့ တခါတလေ ပြီးအောင်ပင် မလုပ်နှိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူမက အပေါ်ကနေ အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ပေးနေရင်း တန်းလန်းမှာပင် ဦးဦးဟာကြီးက ပျော့ကျသွားတတ်သည်။
အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်၏ တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့သည့် “ အနယ်ထိုင်ချိန်မှာ မင်းရောက်လာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလို “““စိတ်ကစွဲလည်း ရုပ်မဆောင်သာ ကျည်ဆံတွေကုန် ယမ်းလည်းကုန် အခွံသာကျန်တဲ့ သေနတ်စုတ်မှာ တာဝန်ကျေပြီး အနားယူရာ ””” ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လို့ကတော့ သူ့အတွက်ကံဆိုးပြီသာမှတ်။
မြူးကြွတဲ့ တီးလုံးသံစဉ် တခုမှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကကောင်းနေတုန်း ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ရသလို တဝက်တပြက်မှာ ဆန့်တငံ့ငံ့ဖြစ်နေရုံမက မုဆိုးအိုကြီး ပြီးသည်အထိ ရွှေသမင်မလေး ပါးစပ်ဖြင့် တာဝန် ယူပေး ရသေးသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကြုံရတိုင်း ငယ်ရွယ်သန်စွမ်းသော ယောကျာ်းတယောက်ကို ဝေဝေအမြဲတန်း တမ်းတမိသည်။
ဇော်ထက်ကို မြင်တော့ ဝေဝေ့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာသည်။ အရွယ်ကလည်း သူအမြဲတောင့်တနေသည့် အရွယ်။ လက်နက်ကြီးကလည်းဒင်ပြေ့ကျပ်ပြေ့ကြီး။
တွေးမိရုံနှင့်ပင် သူမဟာလေးက အချွဲရည်များ စတင်စိမ့်စိုလာတော့သည်။
မမဝေပြောသွားသော မထိတထိ စကားတွေကို ပြန်တွေးရင်း ဇော်ထက်စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာသည်၊၊
လူငယ်ပီပီ ထစ်ကနဲဆိုတာနဲ့ ကာမမီးက ဟုန်းကနဲ တောက်လာသည်၊၊ ကိုယ်ကို ရေခြောက်အောင် သုတ်နေရင်း ဇော်ထက် ဆင်ကြံကြံနေသည်၊၊ သူ့ကိုကြည့်ပြီး မမဝေစိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နေတာ သိသည်၊၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း လှလွန်းသော မမဝေကို ကြည့်ပြီး မကြာခဏ ပြစ်မှားဘူးသည်၊၊ ယခုအချိန် ဒီအိမ်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေသည်၊၊ မိုးကလည်း သဲသဲမဲမဲ ရွာနေသည်၊၊
ဒီလိုဖြစ်လာရင်…တက်လာမည့် ပြဿနာတွေကလည်း မသေး..။
တခုတော့ ရှိသည် ပေါ့ . . .
သူအတင်းကြံလျှင် သဘောမတူရင်တောင် သူနဲ့ လွန်ကျူးလိုက်တဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မမဝေ လူသိ ခံရဲပါ့မလား။
မမဝေ ပြောရဲမယ် မထင်။ တိုင်ရဲမယ် မထင်။
တကယ်တော့ မိုးသည်းသည်းထဲမှာ တံခါးတွေ အလုံပိတ်ထားသည့် တိုက်ခန်းထဲက မမဝေရဲ့
အော်သံကို ဘယ်သူမှ မကြားနှိုင်။
အဝတ်များလဲပြီး ဇော်ထက် အခန်းပြင် ထွက်လိုက်ချိန်တွင်… မှန်တင်ခုံရှေ့ရှိ ခုံပုလေးပေါ်တွင်…
ငူငူလေးထိုင်၍ လည်ပင်းကို ဖိနှိပ်၍နေသော.. မဝေကိုတွေ့ရသည်။
””မသွားတော့ဘူးကွယ်.. မမ..သိပ်နေလို့မကောင်းဘူး.. ခေါင်းထဲမှာလည်း… မူးနောက်နောက်နဲ့..
ကိုယ်တွေ လက်တွေလည်း နာနေတယ်.. ဖျားချင်နေသလားဘဲ…””
““ ဆေးသောက် မလား မမ ကျနော် ရေနွေးတည်ပေးမယ်လေ . . . ”
““ ရပါတယ် ကွယ် . . ဇက်ကျောတွေ ထိုးနေတာက ဆိုးတယ် . . ””
““ ဒါဆို . . .ကျနော်..နှိပ်ပေး မယ်လေ.. မမ””
””ဟား..နှိပ်တတ်တာပေါ့..မမရဲ့ .. ရွာမှာဆို အမေ ဇက်ကျောတက်ရင် ကျနော်ဘဲ၊ တခြားလူတွေ ဘယ်လောက် နှိပ်နှိပ် ဇက်သာ နာတယ် မသက်သာဘူး တဲ့လေ””
““ အဟင်းဟင်း . . ဟင်း .. တယ်လဲ ကြော်ညာတဲ့ အနှိပ်သည်လေး ပါလား ””
““ တကယ် ပြောတာပါ မမရဲ့ . . . ””
““ ဟုတ်ကဲ့ မမ ””
ဖြေပြီး ဇော်ထက် အခန်းပြင် ထွက်ပေးလိုက်သည်။
ကောင်လေး ထွက်သွားသည်နှင့် အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီး မှန်တင်ခုံ ရှေ့တွင် ရပ်၍ အဝတ်တွေကို တခုချင်း ချွတ်လိုက်သည်။
ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးပေါ်က သူမ၏အရိပ်ကို ကြည့်ရင်း ကြေကြေနပ်နပ် ပြုံးလိုက်သည်။ သူ့ အသက် အရွယ်သည် မိန်းမတယောက် အတွက် မှည့်ရွှမ်းသော အရွယ် ဖြစ်သည်။ တချို့က သီးကင်း ချဉ်ချဉ် လေးတွေကို ကြိုက်မည်။
တချို့က ဝမ်းပျဉ်းဟု ခေါ်သော အစိမ်းကနေ အမှည့်ကို ကူးခါစ အရွယ်ကို နှစ်ချိုက်မည်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်။ ချဉ်ဖန့်ဖန့် အရသာကို မကြိုက်သူတွေ ထုနဲ့ထေး။
ဒါပေမဲ့ – အချိုရည်ပြည့်သည့် သရက်သီး မှည့်မှည့် ကိုတော့ မကြိုက် ဘယ်သူ ရှိမှာလဲ။
အစားအစာများထဲတွင် အရသာ အရှိဆုံး အကောင်းဆုံးဆိုသည် “ အသီးမှာသရက် ” ဆိုသည့် စကားသည် သီးကင်းလေးတွေ၊ ဝမ်းပျဉ်း လေးတွေကို ရည်ရွယ်သည် မဟုတ်။
ဝေဝေတို့ အရွယ် အရည်ရွှမ်း အသီးမှည့်မှည့် တွေကို ပြောခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုတာကိုတော့ သိထားစေချင်သည်။
ဝေဝေ တချက် ပြုံးလိုက်သည်။
ဇော်ထက် ဘယ်လောက် လက်သွက်လဲ မကြာခင် သိရတော့မည်။ ကောင်လေးက လျှင်ရင်တော့ အသာလေး ရေလိုက် ငါးလိုက် မျောလိုက်သွားရုံပင်။
တကယ်တော့လည်း ယောကျာ်း ဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲတမ်း ဆာလောင်နေတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ ဖြစ်သည်။ မိန်းမက အထာပေးလျှင် ရှောင်နှိုင်ခဲဘိခြင်း။
ထင်သလို မဟုတ်ဘဲ ခပ်ထုံထုံလေး ဆိုရင်တော့ . . . အဲ့ . . . ခပ် ထုံထုံလေး ဆိုရင်တော့ သူမရဲ့ ပညာတွေ ထုတ်သုံးလိုက်ရုံပင် ဖြစ်သည်။
ဝေဝေ့တွင် အတွေ့အကြုံပေါင်း များစွာ ရှိခဲ့ဘူးသည်။ သူမက စလိုက်လျှင် ဘယ်ယောကျာ်းမှ.. မနေနှိုင်…။
ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းက ဦးဆောင်တာကို သူမ ပိုရင်ခုန်သည်။ ကိုယ်က စပြီး တိုးရတာမျိုးကတော့ သိပ်မလုပ်ချင်။
ယောကျာ်း ဆိုတာ အရာရာမှာ ဦးဆောင်ရတဲ့သူ မဟုတ်လား ရှင်။ ဒီကိစ္စ မှာရော . . . ? အတူတူဘဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ . . . .
ဒါပေမဲ့လဲ ပေါ့လေ . . . ဒီနေ့ အဖို့ ကတော့ . . . ကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ် ကြောင်မဲ ဖြစ်ဖြစ် . . . ပေါ့။ မခံစားရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အားမာန်ပြည့်ပြည့် ကျမ်းမာပျိုမြစ်သော အချစ်မျိုးကို ရဖို့က အဓိက မဟုတ်လား?
အတွေးကို ဖြတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ခြေရင်း အဝတ်စင်တွင် ချိတ်ထားသည့် ပိုးသား ညဝတ်အင်္ကျီကို ဝတ်ခြုံလိုက်သည်။
ခါးစည်းကြိုးကို တမင်ပင် စည်းထားသည် ဆိုရုံ လျော့တိ လျော့ရဲဘဲ စည်းဘဲ ထားလိုက်သည်။ အောက်နားတိုတို အင်္ကျီကို ရွေးထားသဖြင့် သူမ၏ သွယ်စင်းသော ပေါင်တန်များကို ဖုံးကွယ် ထားခြင်း မရှိ။
ပိုးသားပျော့ပျော့အောက်မှ ကော့ထောင်နေသော နို့သီးလေးတွေ ကိုမြင်နေရသည်။
အဝတ်လဲပြီးနောက် အိပ်ခန်း တံခါးကို ဖွင်ပြီး အပြင် ထွက်လိုက်သည်။
ဇော်ထက် သူ့ ကို ငေးစိုက် ကြည့် နေသည်။
““ မမက လှ လိုက်တာ ”” ဝေဝေ ပြုံးလိုက်သည်။
အတော်လာတဲ့ ကောင်လေး ဟု စိတ် မှာတွေးရင်း ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့လည်ခင်းလေး ဖြစ်တော့ မှာကို ကြိုသိလိုက်ပြီ။
ဇော်ထက်အပြောကို မသိယောင် ဟန်ဆောင်၍ ဘာမှ တုန့်ပြန်မှု မပြုဘဲ . .
““ မမ လှဲချင်တယ် ကွယ် အိမ်ခန်းထဲမှာဘဲ နှိပ်ရအောင်””
ဝေဝေ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတော့ ဇော်ထက် နောက်ကနေ လိုက်လာသည်။
အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်သော အခါ ဝေဝေသည် ချက်ချင်း အိပ်ယာပေါ်တွင် မလှဲ သေးဘဲ ခါးလေး ကုန်း၍ တွန့်ကြေနေသော အိပ်ယာခင်းကို.. ပြေပြန့်သွားအောင် လက်ဖဝါးလေးဖြင့် လျောက်ပွတ်နေလိုက်သည်။
မမဝေ၏ နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ပြီး ဇော်ထက်ရင်တွေ တင်းကျပ်လာသည်။ တင်သားတွေက ၀ိုင်းကားနေသည်။
ခါးကို ကုန်းထား သဖြင့် အင်္ကျီတိုတိုက..အပေါ်တက်သွားပြီး ပေါင်ရင်းနှင့် တင်ပါး အောက်ပိုင်းလေး
အိပ်ယာကို ပြန့်ပြူးအောင် လုပ်နေရင်း ကုတင်ပေါ်တွင် ဒူးတဖက်ကို ထောက်ထား လိုက်သော အခါတွင် ပေါင်တန်နှစ်ချောင်း ဆုံရာရှိ.. မမ၏ ရတနာသိုက်ကိုပင်.. လှစ်ကနဲ မြင်လိုက်ရလေသည်..။
ဝေဝေကတော့ ဇော်ထက်ရှိနေသည်ကို ဂရုပင် မစိုက်။ စိမ်ပြေနပြေ အိပ်ယာကို သန့်နေလေသည်။
ဇော်ထက် တယောက် မှာသာ နောက်ကနေကြည့်ရင်း စိတ်တွေ ဘလောင်ဆူနေသည်။
““ အဲ့လို ပုံစံ ဆို မမဝေ ရဲ့ အဖုတ်ကြီးက ဖင် နှစ်လုံးကြား ကနေ ပြူးထွက် နေမှာ ”” ဟု တွေး မိသည်။
ဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာ မမဝေကို သူ့ဆရာ ဦးခင်မောင်မြင့် ဆော်မှာကို တွေးမိလိုက်တော့ ဇော်ထက် စိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာသည်။ ဆရာ့ အပေါ်မှာ တက်ထိုင်ပြီး လုပ်ပေးနေမည့် မမဝေကို မြင်ယောင် မိသည်။ နောက်တခါ လေးဘက်လေး ထောက်ပြီး စိတ်ကြိုက် ပေးထားမည့် ပုံစံ ကို တွေး မိပြန်သည်။
မမဝေသည် ကာမ စပ်ယှက်လျှင် အော်ညည်းတတ်သော မိန်းမ တယောက်လား ဇော်ထက် သိချင်နေသည်။ ကောင်းလာလျှင် မိန်းမတိုင်း အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးတတ်တာ ဇော်ထက်သိသည်။ အော်ဟစ် ညည်းတွားရင်း အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေသော မမဝေကို စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံဖေါ်မိတော့
ဇော်ထက် သက်ပြင်းရှည်ကြီးကို ခိုးချလိုက်မိသည်။
စိတ်သွားတိုင်းသာ ကိုယ်ပါ နှိုင်လျှင်၊ ကုတင်စောင်းတွင် ဖင်လေး ကုန်းထားသော မမဝေ၏ နောက်ကနေ တအားဆွဲပြီး စောင့်စောင့် လုပ် ပေးလိုက်ချင်သည်။
ဝေဝေသည် နောက်ဆုံးတွင် စိတ်ကျေနပ်သွား ဟန်ဖြင့် ကုတင်ပေါ် အသာလေးတက်၍ ပက်လက် အိပ်လိုက်ပြီး… အညာစောင် ပါးပါးလေးကို ကိုယ်ပေါ်မှာ လွှမ်းခြုံလိုက်သည်။
““ကန်တော့နော်.. .မောင်လေး.. မတတ်သာလွန်းလို့သာ.. အားလည်းနာတယ်… ခြေသလုံးတွေနဲ့ . . ပေါင်တွေက.. သိပ်ကိုက်တာဘဲ… ””
ဇော်ထက်.. ကုတင်ပေါ်တွင် တင်ပလွှဲထိုင်လိုက်ရင်း… ခြေသလုံးတွေကို စတင်၍ နှိပ်ပေးလိုက်သည်။ နှိပ်ပေးတာကို..မျက်လုံးလေးမှိတ်၍ ပက်လက်ကလေး အိပ်ရင်းငြိမ်ခံနေသည်။ တချက် တချက် ကြားရရုံ အသံတိုးတိုးလေး ဖြင့် “ ဟင်း ” ကနဲ . . “ အင်း ” ကနဲ ညည်း လိုက်
““ နာသွားလို့ လား မမ ””
““ အင်း .. ရပါတယ် ကွယ် . . . မနာပါဘူး . . . မင်းလက်က သိပ် ပေါက် တာဘဲ . . . ””
တကယ်တော့ ဇော်ထက် နှိပ်တာက ကြောင်ကလေးတွေ နှိပ်သလို ဖွဖွလေး နှိပ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်က ပေါက်သည် ဆိုတော့လဲ ပေါက်သည်ဘဲ ထားလိုက်ပါတော့။
””ကောင်းလိုက်တာ.. မောင်လေးရယ်… အရမ်းကို သက်သာသွားတာဘဲ… ကျေးဇူးပါဘဲကွယ်..””
““ ဇော်ထက် ဘာ အားကစား လုပ်လဲ? ”” ကောင်လေး၏ ပေါင်ကို ဖျစ်ညှစ်နေရာက မေးလိုက်သည်။
““ ဘာဖြစ်လို့လဲ မမ . . . ””
““ ပေါင်တွေက အရမ်းမာလို့ လေ . . . ကြွက်သားတွေက သန်စွမ်းလွန်းလို့ . . . ””
““ ကျနော်ကတော့ ဘော့လုံးကန်၊ ရေကူး၊ ကရာတေး၊ အကုန် ကစား တာဘဲ . . . မမ ””
မမ လက်တွေက ပေါင်တလျှောက်ကို ပွတ်နေသည်။
ဇော်ထက်လက်တွေကလဲ မမ ပေါင်တလျှောက်မှာပေါ့။
””အခုတော့လည်း.. အိုက်လာပြန်ပြီ…. ကန်တော့.. မောင်လေးရယ်… ကန်တော့.. ကန်တော့…မ မကိုစောင်လေး ဖယ်ပေးပါဦး…””
မမဝေ ကိုယ်ပေါ်တွင် လွှားထားသော စောင်ကိုဇော်ထက်.. ဖယ်လိုက်သည်..။ ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါးက..
ပေါင်လည်ခန့်သာ ရှေသည့်အပြင်.. အလည်ကလည်း ဟ၍နေရာ.. မဝေ၏ ပေါင်ရင်းနီးပါး အထိကို မြင်နေရသည်။ ဇော်ထက်ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုံ နေသည်။
မဝေ၏ ပေါင်ကိုနှိပ်ပေးရင်း.. သူ့မျက်လုံးတွေကတော့.. ညဝတ်အင်္ကျီနှင့် မကွယ့်.. တကွယ်လေး
ဖြစ်နေသော ပေါင်ကြားမှာ ရောက်နေသည်။
အခြေအနေက ပေးနေပေမဲ့.. ဇော်ထက် နဲနဲ လန့်နေသေးသည်။
အထာပေးနေသည်ဟု ထင်ပေမဲ့ ရာနှုံးပြည့် မသေခြာ။
ကိုယ်က စလိုက်မှ ဝူးဝူးဝါးဝါး ထလုပ် လျှင် ရှုပ် ကုန်မည်။
ပေါင်ကိုနှိပ်ပေးနေသော လက်တွေကို တဖြေးဖြေးနှင့် ပေါင်ရင်းဖက်ကိုရွှေ့ လာနေသည်။ ဇော်ထက် ရင်မှာ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေပေမဲ့.. မမကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပင်.. မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး. .ငြိမ်နေသည်။ လက်တွေကသာ ဇော်ထက်ကို ပွတ်ပေးနေသည်။
မဝေကိုယ်ကိုလှုပ်၍ နေရာပြင်လိုက်သည်။ ကိုယ်တွင်ပတ်ထားသော.. ညဝတ်အင်္ကျီက ပြေသွားသည်။
မမဝေရဲ့ လှို့ဝှက်သော အရာတွေ ပေါ်လာသည်။
ပေါင်တန် ဖွေးဖွေးနှစ်ချောင်း ကြားကမမရဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကို အတိုင်းသား.. အကာအကွယ်မရှိ မြင်နေရသည်။
အကွဲကြောင်းအစပ် ဆီးခဝုံန်းကျင်မှအပ.. အဖုတ်တခုလုံးကို အမွှေးများ ပြောင်စင်အောင် ရိပ်သင်ထားသည်။ ကျန်ရှိနေသော အမွှေးများကိုလည်း ခပ်ပါးပါးလေး ဖြစ်အောင် ညှပ်ထားသည်။ နဂိုလ်ကပင် အသားဖြူသူ.. မမ၏ ဖွေးဥနေသော ဆီးခုံမို့မို့နှင့် အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ဇော်ထက်၏ ရင်ခုန်သံကို ပို၍မြန်လာစေသည်။ ပြည့်ဖေါင်းသော နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေကြားမှာ အစေ့လေးက ပျောက်နေသည်။
မမက လူကသာ လှသည်မဟုတ်၊ အဖုတ်ကလည်း လှသည်။
မုန့်ပေါင်းလို အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ကြည့်ရင်း ”စောက်ဖုတ်မုန့်ပေါင်း.. လိုးလို့ကောင်း” ဆိုသည့် စကားကို သတိရမိသည် ။
ဇော်ထက်စိတ်တွေက ဝေဝေ့ပေါင် ကြားမှာ ရောက်နေသည်။
ဝေဝေ မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့် လိုက်ပြီး ဇော်ထက် အခြေ အနေကို မြင်ရတော့ ကျိတ်ပြီး ပြုံးလိုက်သည်။ ငါးကလေး ဇော်ထက်တော့ ချိတ်မှာ မိနေပြီ။
““ စောင် ခြုံမထားတော့လဲ ချမ်းလာတယ် ဇော်ထက် ရဲ့ ””
ဇော်ထက် ဘေးမှာ ပုံချထားသော စောင်ကို ယူ၍ ပြန်ခြုံလိုက်သည်။
မမ အဖုတ်လေး ဇော်ထက် မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်သွားသည်။ အဲ့ဒီလို ကြည်စယ် ကစားရတာမျိုးတွေ ကို ဝေဝေ ရင်ခုန် တတ်သည်။
ဇော်ထက်ကတော့ သက်ပြင်းကြီးတွေသာ တခုပြီး တခု ချနေရသည်။
ကောင်ကလေး မချင့်မရဲ ဖြစ်နေတာကို ဝေဝေ ကျေနပ်နေသည်။
မမက ရိုးရိုးသားသား လား?
သူ့ကို မြူနေသည်လား ဇော်ထက် မဝေခွဲတတ်တော့။
သူသိတာကတော့ တခုဘဲ ရှိသည်။ သူ့စိတ်တွေကို သူမနိုင်တော့။
မမဝေ ကိုယ်ပေါ်တွင် လွှမ်းထားသော စောင်ကို ရုတ်တရက် ဆွဲခွါလိုက်သည်။
ညဝတ်အင်္ကျီရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ တင်းမာကော့ထောင်နေသော ရင်သားနှစ်လုံးက ဘွားကနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်။
““ ဇော်ထက် . . . ဘာလုပ်တာလဲ ”” မမဝေ ဒေါသတကြီးအော်သံနှင့် အတူ အင်္ကျီကို အတင်း ပြန်စေ့ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။
ပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်ပြီး မမဝေ အပေါ်ကို မှောက်အိပ်လိုက်ခါ ကိုယ်လုံးဖြင့် ဖိထား လိုက်သည်။ အတင်း ရုံးကန်နေသဖြင့် ဟသွားသော ပေါင်ကြားထဲကို ရအောင် ဝင်လိုက်သည်။
““ ဇော်ထက် . . မင်း မယုတ် မာနဲ့ နော် . . . ”” မမဝေ ပါးစပ်က သွေးရူးသွေးတန်း ပြောနေသော်လည်း တကယ်က အင်အားချင်း မမျှ။ လက်ကောက်ဝတ် နှစ်ဖက်ကို ချုပ်ကိုင်၍ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဖိကပ်ထားလိုက်သည်။
လက်နှစ်ဖက်ကိုအချုပ်ခံထားရပြီး ခြေနှစ်ဖက်က ဇော်ထက်ကိုခွလျက်သား ဖြစ်နေသည်။ ဘယ်လို ရုန်းကန်ပါစေ လွတ်လမ်းမမြင်။
အနေအထားက မှန်နေတော့ ဇော်ထက်ဟာကြီးက ဝေဝေ့ အပေါကဝ်မှာတေ့ထား ပြီးသား ဖြစ်နေသည်။
မမဝေရဲ့ ကိုယ်ငွေ့ နွေးနွေးနှင့် စိုစွတ်မှုကို လိင်တံ ထိပ်ဖျားတွင် သိရှိနေသည်။
ဝေဝေ ဇော်ထက်ကို မကစားရဲတော့။
ကောင်လေးက ရူးရူးမိုက်မိုက်နှင့် တကယ်လုပ်မဲ့ပုံ ပေါက်နေပြီ။
““ မမ တောင်းပန်ပါတယ် မောင်ဇော်ထက်ရယ် . . မမကို လွှတ်ပေးပါ . . . . ””
ဇော်ထက် ခေါင်းကို ခါရမ်းလိုက်သည်။
လူမဆန်သော အကြံတွေကို သူ့အတွေးထဲကနေ ဖျောက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ မိန်းမတယောက်ကို အနိုင်အထက် လုပ်ရလောက်အောင် အထိ သူ အောက်တန်းမကျ။
ဇော်ထက် – “ စိတ်ကူးထဲက မုဒိန်းမှု ” ကို အတင်း မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနောက် ငြိမ်သက်စွာ အနှိပ်ခံနေသော မမဝေ၏ မျက်နှာလေးကို ကြည့် လိုက်သည်။ မျက်လုံးမှိတ်၍ မှိန်းနေသော မျက်နှာပေါ်တွင် အပြုံးရိပ်တွေ သန်းနေသည်။ မမဝေလက်တွေကတော့ သူ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ရှိနေဆဲ။
ဇော်ထက်ရဲ့ လက်တွေက ခြုံထားသော စောင်အောက်မှာ လှုပ်ရှားနေသည်။
ဝေဝေ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည်။
လက်တွေ ပေါင်ရင်းနားကို ရောက်လာသော အခါ ဝေဝေ.. ပေါင်ကို အနဲငယ် ကားပေး လိုက်သည်။ ဇော်ထက် စိတ်တွင် ဖိတ်ခေါ်မှုဟု မှတ်ယူလိုက်သည်။
အရဲတင်း၍ လက်ကို ပေါင်ရင်းခွဆုံအထိ ရွှေ့လိုက်သည်။ တချက်တချက်တွင် မမဝေ၏ အဖုတ် နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်သတ်မိသည်။
ဝေဝေ ခေါင်းကလေး မော့ထားပြီး နှုပ်ခမ်းလေး နှစ်ခုက ပွင့်ဟလာသည်။
ဒီလောက်ဆိုလျှင် သူကျားကွက်ကို စရွှေ့ဖို့ လိုပြီဟု ဇော်ထက် သိလိုက်သည်။ လက်ကို အသာအယာ ဆီးခုံ မို့မို့ပေါ်သို့ ရွှေ့လိုက်တော့သည်။ အမွှေး ပါးပါးလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ် ကစားပေးလိုက်သည်။
မမဝေက သူ့ပေါင်ကို ဖျစ်၍ ကိုင်လိုက်သည်။ သူပို့ လိုက်သည့် မက်ဆေ့ခ်ျကို မမဝေ တုန့် ပြန်လာသည်။
နှစ်ယောက်သား သဘောပေါက်သွားပြီ။ အပေးအယူ မျှသွားပြီ။
လက်ခလယ်ဖြင့် ဆီးခုံပေါ်မှာ ဝလုံး ၀ိုင်းဝငိုင်းလေးတွေ ဖွဖွ ရေးရင်း လက်ချောင်းလေးတွေက
ပေါင်ကြားဆီသို့ ရွှေ့သွားသည်။ မမဝေက ခြေနှစ်ချောင်းကို ပိုပြီးကားပေးလိုက်သလို ဇော်ထက်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ ကလည်း အလိုက်တသိ အလုပ် လုပ်နေသည်။
အချွဲရည်တွေ ရရွှဲစိုနေသော အဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထိသည်ဆိုရုံလေး ပွတ်သပ်
အခန်းတခုလုံး၊ တိတ်ဆိတ်နေသည်။ အပြင်မှာ မိုးတွေက သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေသည်။
ဝေဝေသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေး အိပ်ရင်း မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပြီး ဇော်ထက်လုပ်သမျှကို ငြိမ်ခံနေသည်။
သိမ့်ကနဲ လှုပ်သွားသဖြင့် မျက်စေ့မှိတ်ထားပေမဲ့ ဇော်ထက် ကုတင်ပေါ် တက်လာတာကို ခန့်မှန်းမိသည်။ ပက်လက်ကလေး ငြိမ်အိပ်နေသော ဝေဝေ၏ ညာဖက်နံဘေးတွင် ဇော်ထက် ဝင်အိပ်လိုက်သည်။ မမဝေဖက်ကို စောင်းအိပ်နေရင်း စောင်လွတ်နေသော မမဝေ၏ ပုခုံးသားလေးကို နမ်းလိုက်သည်။
ဇော်ထက်က သူ့ညာဖက်လက်ကို စောင်အောက်ကို ပြန်ထည့်လိုက်ပြီး မမဝေ၏ ဘိုက်ပေါ် တင်လိုက်သည်။ လက်ဖဝါး တခုလုံးကို ဝမ်းဘိုက်ဖြင့် မထိတထိ ပွတ်တိုက် သွားရင်း တဖြေးဖြေး ရင်သားများဆီ ရွှေ့လိုက်သည်။
စောင်အောက်မှာပင် ရှိနေသေးသော မမဝေ၏ ရင်အစုံဆီရောက်တော့ ဘယ်ဖက် နို့ လုံးလုံးလေးပေါ် အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
ကိုယ်ခန္တာ အလှအပကို အမြဲဂရုစိုက်နေသူမို့၊ ရင်သားတွေက တင်းကော့နေသည်။
မကြီးမငယ် အနေတော် အရွယ်မို့ နို့အုံတခုလုံးက လက်ထဲတွင် ပြေ့လျှံသည် ဆိုရုံလေး ရှိနေသည်။ လက်ချောင်း လေးတွေကို လှုပ်ကစား၍ နို့တင်းတင်းလေးကို ဖွဖွလေး ဖျစ်နယ် ပေးလိုက်သည်။
ဝေဝေ့ ညာဖက်လက်က ဇော်ထက် ပေါင်ကြားကို ရောက်လာသည်။ ဘယ်ဖက်ပေါင် အတွင်းဖက်ကို ဖိ၍ ပွတ်သပ်နေသည်။
ဇော်ထက် စောင်ကို ခွါလိုက်သည်။
ရင်သားလေးတွေက ဖွေးဥ နေအောင်ဖြူသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ရဲနေသည်။တံတောင်ဆစ်ကို အားပြု၍ ဝေဝေ့ အပေါ် အုပ်မိုးထားရင်း ထောင်ထနေသော နို့ သီးခေါင်းလေးကို ငုံစုတ်လိုက်သည်။
ဝေဝေ့ဆီက ညည်းသံ သဲ့သဲ့ ထွက်လာသည်။
လက်တဖက်ဖြင့် ကောင်လေး၏ ပုခုံးကိုသိုင်းဖက်လိုက်ရင်း ညှို့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်လိုက်သည်။
““ မင်းတော်တော် ဆိုးတယ် ””
ဇော်ထက်က သွားတက်ကလေး ပေါ်အောင်ပြုံးရင်း ““ မမက သိပ်လှတာကိုး ”” ဟု ပြောသည်။
““ ဟွန်း ” မျက်မှောင်လေးကျုံ့ပြီး ပြောလိုက်သော မမဝေ၏ မျက်နှာထားလေးက ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလှသည်။
အဝတ်ကင်းမဲ့နေသော ဝေဝေ့ကို ကြည့်ရင်း သူတွေ့ဖူးသမျှ မိန်းမများထဲတွင် အလှပဆုံးသော ရင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ် စိတ်ထဲတွင်တွေးမိသည်။
ညဝတ် အင်္ကျီလေးက ဝေဝေ့ဘေးနှစ်ဖက်တွင် ပုံကျ နေသည်။
ဇော်ထက်ရဲ့ နှုပ်ခမ်းတွေက သူမ၏ရင်သားအစုံကို နေရာလပ် မကျန်အောင် မထိတထိလေး နမ်းနေသည်။
ဝေဝေ့ လက်တွေက ပေါင်ကနေတဆင့်.. လိင်တန်ကြီးဆီ ရောက်သွားသည်။ လက် တဆုတ်စာပင် မကချင်သော ဇော်ထက်၏ ပစ္စည်း ပူပူနွေးနွေးကြီးကို ဖွဖွလေး ဆုတ်နယ် ပေးလိုက်သည်။
သူတို့သည် လူပျို အပျိုတွေ မဟုတ်။ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ချိန်းတွေ့ နေသော သမီးရီးစားလည်း မဟုတ်။
ဘာမှ ရှက်နေစရာ ကြောက်နေစရာ မလို။
ဟန်ဆောင် နေစရာ၊ ထိန်းနေစရာ မလိုတာကို နှစ်ယောက်လုံး သိသည်။
ဝေဝေ့ နို့သီးလေးကို နှုပ်ခမ်း ၂ခုကြားတွင် မိသည် ဆိုရုံလေး ညှပ်ထားပြီး လျှာဖျားလေး ဖြင့် လှိမ့်ပေးလိုက်သည်။
“ ဇော် . . . ”
ဝေဝေ တိုးတိုးလေး ခေါ်ညည်းလိုက်သည်။
ဇော်ထက်က ညာဖက် နို့ကလေး။
နောက် တခါ ညာဖက်ကို တခါ စို့ပေးလိုက်ရင်း တုန့်ပြန်သည်။
ပစ္စည်းကြီးကို ကိုင်တွယ် ဆော့ကစား နေရာက လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ဇော်ထက်၏ ခါးအောက်ကို
လက်လျှို၍ ပင့်မလိုက်သည်။ ကောင်လေးကလဲ မမဝေ အလိုကို သိနေသည့် အလား ထောက်ထားသော တံတောင်ကို အားပြုလိုက်ပြီး ဝေဝေ့ အပေါ်ကို တက်လိုက်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ဝေဝေ့အပေါ်မှာ ပိမနေအောင် တံတောင် နှစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး မှောက် အိပ်လိုက်ရင်း ဟဟလေးပွင့် နေသော နှုပ်ခမ်းလေး ကို နမ်းလိုက်သည်။
ထိုမှ တဆင့် လည်တိုင် ကြော့ကြော့ဆီ ရောက်လာသည်။
ဒူးကို ကွေး၍ ကားပေးထားသော ပေါင်ကြားတွင် ရောက်နေသည့် ဇော်ထက်ကို ခွထားလိုက်ပြီး ခြေဖဝါး နှစ်ခုကို လိမ်ယှက်ထားလိုက်သည်။
ရင် အစုံကနေ အထက်ပိုင်း တခုလုံးကို ဇော်ထက် အနမ်းများ ပေးနေစဉ် ဝေဝေသည် သူမ၏ လက်သည်း ချွန်ချွန်လေးများဖြင့် ကျစ်လစ်ကြံ့ခိုင်သော ဇော်ထက်၏ နံရိုးအိမ် တဖက်တချက်ကို ဖွဖွလေး ကုတ် ခြစ်ပေးနေသည်။
သူမ၏ စိတ်ဆန္ဒတွေကို တဖြေးဖြေး တရိပ်ရိပ် တက်လာအောင် လုပ်တတ်သော ဇော်ထက်ကိုတော့ ချီးကျူးမိသည်။ မိန်းမ အကြောင်းတော်တော်သိတဲ့ ကောင်လေးဟု တွေးမိလေသည်။
ဝေဝေ တွေ့ဖူးသော ယောကျာ်း များသည် အခွင့်ရသည်နှင့် အတင်းတက်ခွပြီး သူတို့ဟာကြီး ထိုးထည့်ဖို့သာ အားသန်ကြလေသည်။ အနဲဆုံးတော့ လက်ဖြင့် အဖုတ် ကို ကိုင်တွယ်နယ်ဖတ်ပြီး ကလိပေးတတ်ကြသူများသာ ဖြစ်သည်။
ဝေဝေ့ နှလုံးတွေ တလှပ်လှပ် တုန်နေပြီ။
ရင်ခုန်သံ တဒုတ်ဒုတ်က ကျယ်လောင် ပေမဲ့ သူ့ ဆီကလား ဇော်ထက်ဆီကလား ခွဲခြားဖို့ ခက်သည်။ ကိုယ်ခန္တာ နှစ်ခုက တသားထဲ နီးပါး ပူးကပ် နေပြီ။
လက်တလုံးစာလောက် ဖွင့်ဟထားသည် ဇော်ထက်၏ နှုပ်ခမ်းထူထူ တစုံက ဝေဝေ့လည်တံပေါ် ထိကပ်လာပြီး စုတ်ယူ လိုက်သည့် အချိန်တွင် . . . .
““ ဇော် ရယ် . . . . ””
နောက်ထပ် တမ်းတ ခေါ်ညည်းသံ တခုနှင့် အတူ တောင့်တင်း သန်စွမ်းသည့် ပေါင်တံ သွယ်သွယ်
နှစ်ချောင်းက သူ့ကိုယ်ခန္တာ အောက်ပိုင်းကို တင်းကျပ်စွာ ခွချုပ်ထားလိုက်ကြောင်း ဇော်ထက် ခံစားမိလိုက်သည်။ ကိုယ်ချင်းက ပိုလို့ ပူးကပ် သွားသည်။
တင်းမာ ကော့ထောင်နေသော ကောင်နွေးနွေးကြီးက သူတို့၏ ဆီးခုံနှစ်ခုကြားတွင် ရောက်နေသည်။ တခြားကိုယ်ခန္တာ အစိတ် အပိုင်းတွေထက် ပိုနွေးသော ထိုအရာ၏ အထိအတွေ့ ကို ဝေဝေ သတိထားမိသည်။
ဇော်ထက်၏ ဥ ကြီးကလည်း ဝေဝေ့ ပေါင်ကြားက ကိုယ်ငွေ့ နွေးနွေး ကို ခိုလှုံနေလေသည်။
သူ့ နှုပ်ခမ်းကို အနမ်းတွေ ရောက်လာချိန်မျိုးတွင် ဇော်ထက်၏ စံထားအတိုင်း မထိတထိ
ဖွဖွလေးသော်၎င်း၊ တခါတခါ လျှာချင်း ထိတွေ့၍သော်၎င်း တုန်ပြန် ပေးချိန်မှ အပ၊ ဝေဝေသည် ခေါင်းကလေးကို မော့ထားပြီး ထွက်သက်ကိုရော ဝင်သက်ကိုပါ ပါးစပ်လေးဟ၍ ရှူရှိုက်ရသည် အထိ မောလျ နေတော့သည်။
သူ့စိတ်တွေကို ထကြွလာအောင် ဆွပေးနေတဲ့ ကောင်လေးကို အကြောင်းပြဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဟု ဝေဝေ
ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီးနောက် ဇော်ထက်၏ တကိုယ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပွေ့ ၍ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် ပူးကပ်နေသော ကိုယ်ခန္တာ နှစ်ခုကို တပတ် လှိမ့်လိုက်လေသည်။
ဇော်ထက် အပေါ်ကို ဝေဝေ ရောကသ်ွားသည်။ မထိတထိ တို့ကနန်း ဆိပ်ကနန်း လုပ်နေသော ဇော်ထက် တယောက် ကြောင်ရိုင်းမလေး ဝေဝေ့ ကို အံ့သြသွားလေသည်။
အတင်းဖက်ထားရာကနေ ကိုယ်ကို မတ်လိုက်သည်။
ပက်လက် အိပ်နေသော ဇော်ထက် အပေါ်တွင် ခွထိုင်ပြီးသား ဖြစ်သွားသည်။ ကိုယ်ပေါ်က ညဝတ် အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်သည်။
အင်အားကြီးမားလှသော အနန္တ ကမ္ဘာ မြေကြီးပင်လျှင် မမဝေကို အရှုံးပေးထားရသည်။ ရှောက်သီး ခပ်ထွားထွား သာသာ အရွယ်ရှိ မမဝေ၏ ရင်သား အစုံသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကို အံတု၍ အိတွဲခြင်း လုံးဝ မရှိဘဲ ကော့ထောင်နေလေသည်။
ဇော်ထက်၏ ရင်ဘတ်ပေါ်သို လက်နှစ်ဖက်ကို ထောက်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကိုယ် အနည်းငယ်
ရှေ့တိုးလိုက်သည်တွင် ဇော်ထက်ဟာကြီးသည် အချွဲရည်များ ရွှဲစိုနေသော ဝေဝေ့ အကွဲကြောင်း ကြားသို့ အံကျ ဝင်သွားတော့သည်။
ဇော်ထက်ကို ညှို့ မျက်လုံးများ ဖြင့် ကြည့်ရင်း ခါးအောက်ပိုင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ဇော်ထက် ကောင်ကြီးကို အကွဲကြောင်း ကြား တွင် ညှပ်၍ ကွင်းတိုက် ပေး သလို ဖြစ်
ဝေဝေ လှုပ်ရှားမှု အတိုင်း တင်ကလေး ရှေ့တိုးလာလျှင် တောင်ကြား ဒေသသို့ ခိုလှုံသွား သလို နောက်ရွှေ့ လိုက်ချိန် မှာ အကွဲကြောင်း ကြားက ခေါင်းပြူ၍ ထွက်လာလေသည်။
ထိုသို့ လုပ် ပေးနေရင်းက ဇော်ထက် ကိုယ်ပေါ် လက်တင်လိုက်ပြီး ကြောင်ကလေးတွေ ဝပ်သလို
မှောက်ဝပ် လိုက်သည်။ မျက်လုံးချင်း စုံနေသော အကြည့် တွေကတော့ လုံးဝ မရွှေ့ပြောင်း။
ကောင်လေး၏ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးကို ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်သည်..။
နောက်တော့ ဇော်ထက်ရဲ့ နို့သီး တွေကို ငုံစုပ်ရင်း သူ့ကို ဇော်ထက် လုပ်ပေးသကဲ့သို့ ပြန် လုပ်ပေးလိုက်သည်။
ဇော်ထက်က ဝေဝေ ဆံစလေး များ ကို ပွတ်သပ် ဆော့ ကစား နေသည်။
အနမ်းတွေက တဖြေးဖြေးနှင့် ကိုယ်ခန္တာ အောက်ပိုင်းကို ရွေ့လျားလာသည်။ လမ်းတလျှောက်တွင် ဝေဝေ့ နို့လေးတွေက ဇော်ထက်ကို ပွတ်တိုက် ကြည်စယ် သွားကြ သေးသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ဝေဝေ့အနမ်းတွေက ကောင်လေးရဲ့ ပစ္စည်းကြီးဆီကို ရောက်လာသည်။ မတ်မတ်ကြီး တောင်နေသော လီးကြီးကို ဝေဝေအနီးကပ် မြင်နေရသည်။ အသားက ခပ်ညိုညိုမို့ လီးကြီးကလည်း ညိုသည်။
တုတ်တုတ်ရှည်ရှည် လီးတန်ညိုညိုကြီးရဲ့ ထိပ်မှာ ဒစ်ကြီးက ကားနေသည်။
တလျှောက်မှာ သွေးကြောကြီးတွေက ထောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို လက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင် ထားရင်း.. ဒစ်ကြီးကို နှုပ်ခမ်းလေးတွေနှင့် ငုံစုပ်လိုက်သည်။
လျှာလေးကလည်း အငြိမ်မနေ .နှုပ်ခမ်းဖူးဖူးလေး နှစ်ခုကြားတွင် မိနေသော ဒစ်ကားကြီးကို နေရာမလပ် ပွတ်တိုက်နေသည်။နောက်တော့.. ဒစ်ကြီးသာမက.. လီးတန်ကြီး တချောင်းလုံးကို လျှာလေးနှင့် လျောက်လျှက်ပေးလိုက်သည်။
ဥကြီးကို လျက်ပေးလိုက် ချိန်မှာတော့.. ကောင်လေးထံမှ ညည်းသံကြီး ထွက်လာလေသည်။ လီးကြီးကို ကျေနပ် အားရလောက်အောင် စုပ်ပေးပြီးသောအခါ.. ပက်လက်ကြီး အိပ်နေသော ဇော်ထက်နံဘေးတွင် လှဲအိပ်လိုက်သည်။
လီးကြီးကို လက်တဖက်ဖြင့် ကွင်းတိုက်ပေးနေရင်း ဝေဝေကပင် စ၍ တောင်းဆို လိုက်တော့သည်။
ဇော်ထက်.. လှဲနေရာက ထ၍ ဝေဝေ့ကိုပွေ့ယူလိုက်ပြီး ပက်လက် ကလေး ဖြစ်အောင် ပြင် သိပ်လိုက်သည်..။
”” မောင်ဟာကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး.. မတောင်ခင်က.. သိပ်မကြီးဘူးလို့ ထင်ရပေမဲ့.. အဲ့ဒါကြီးက တောင်လာတော့.. မမ လက်နဲ့တောင် မဆံ့ချင်ဘူး..””
””မမရဲ့.. အဖုတ်လှလှလေးကို.. ဒါကြီးတဆုံးထဲ့ရမှာ. .မောင်စိုးရိမ်တယ်.. ””
””ဟင်းဟင်း.. ဟင်းဟင်း.. သူသိပ်ပိုတာဘဲ… ကဲပါ… လုပ်ပါတော.. ဒီကခံချင်နေပြီ..””
ဇော်ထက်သည် အိပ်နေရာက ထလိုက်ပြီး အလိုက်သင့် ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင်၍ ကားပေးထားသော ဝေဝေ့ ပေါင်ကြားတွင် ဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်သည်။
ရီးစားနှင့် အလိုးခံရဖူးခါစ အပျိုပေါက်မလေးလို ရင်တွေ တလှပ်လှပ် ခုန်နေသည်။ မကြုံဖူးသေးသော သူတွေလို ကြောက်တာမျိုးလဲ မဟုတ်၊
အရသာကို ကြုံတွေ့ ဖူးခါစ တမ်းတမက်မောစွာ ငံ့လင့် သော မောင်ကျန်တစ်တို့ ခံစား မှုမျိုး ဖြစ်သည်။
မျက်စေ့ကို မှိတ်၍ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပေးထားရင်း သူမ၏ အဖုတ်ထဲကို ဝင်လာမည့် ကောင်လေး၏ လီးပူပူနွေးနွေးမာမာကြီးကို မျှော်လင့်နေမိသည်။
ပေါင်ကြားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း မမ၏ အဖုတ်လှလှလေးကို ဇော်ထက်အရသာခံ၍ ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လို အချိန်မျိုးဘဲကြည့်ကြည့် မမဝေသည် အမြဲလှနေသည်။
ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲပေးထားသော်လည်း.. အမြင်မရိုင်း။
တကိုယ်လုံးလှသော မမဝေသည် ဖြဲကားပေးထားသော အဖုတ်လေးကတောင် လှသည်။
မမရဲ့ အဖုတ်လှလှလေးသည် .. အရုပ်ဆိုးလောက်အောင် ပြဲမနေ။ အကွဲကြောင်းလေးက.. ဟသည်ဆိုရုံလေး ဟနေသည်။
ထိုအကွဲကြောင်း ဟဟလေး ကြားက အစေ့လေးနှင့် အတွင်း နှုပ်ခမ်းသားလေးကို မြင်နေရသည်။ အပေါကဝ် ရှိသည့် နေရာလေးမှာ အချွဲရည်လေးတွေ ပြည့် နေသည်။
ဇော်ထက်သည် သေသေခြာခြာ ရိပ်သင်ထားသဖြင့် စောက်မွှေး ရေးရေးလေးသာ ရှိသောမဝေ၏ ဆီးခုံ
မို့ဖါင်းဖေါင်းလေးကို ဖွဖွလေးငုံ့ နမ်းလိုက်လေသည်၊၊
ဝေဝေသည် ထင်ထားသလို သူမ၏ အဖုတ်ထဲ လီးကြီးဝင်မလာဘဲ အနမ်းခံလိုက်ရသောအခါ ရုတ်တရက် တကိုယ်လုံးပင် တုံသွားရလေသည်၊၊
“ ဇော် . . ” အံ့သြမှုဖြင့် ခေါ် မိသည်။
ပေါင်ကြားက ကောင်လေးက သူ့ ကို မော်ကြည့်ရင်း . . .
“ မမ ဟာလေး ကို ချစ်လို့ နမ်းမိသွားတယ် ” ပြုံးပြီး ပြောလိုက်သည်။
အဖုတ်ကိုဘဲ “ ချစ်လို့ ” တဲ့ . .
စကားဆုံးသည်နှင့် ဇော်ထက် ဆက်နမ်းသည်။
အနမ်းများသည် ဆီးခုံမို့ဖေါင်းဖေါင်းက တဆင့် အဖုတ်နှုပ်ခမ်းသား ဖေါင်းဖေါင်းလေး နှစ်ခုဆီသို့ ရောက်လာလေသည်၊ ဝေဝေမှာ သူမ၏အဖုတ်ကို ဖွဖွလေးနမ်းပေးနေသည်ကို ခံစားရင်း တခါမှ မကြုံဘူးသေးသည့် ထူးခြားလှသော အရသာကို တအံ့တသြ ဖြစ်မိလေသည်၊၊
သူမ ဘဝတသက်တာတွင် သူမကသာ စုပ်ပေးခဲ့ဘူးသည်၊ သူမ၏ အဖုတ်ကို တခါဘူးမျှ အနမ်း မခံခဲ့ရဘူးပေ၊၊
ရင်ခုံခြင်းနှင့်အတူ သူမ၏ ကာမဆန္ဒတွေ ပို၍ပို၍ ထကြွလာသည်ကို သတိပြုမိလာသည်၊၊
ဇော်ထက်သည် ဝေဝေ၏ အပြင်နှုပ်ခမ်း နှစ်ခုကို လျှာဖြင့် လျှက်ပေးနေရာမှ လက်မနှစ်ခုဖြင့် ဟ၍ဖြဲလိုက်ရာ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြားမှ အရည်တွေ ရွဲရွဲစိုနေသော အခရာလေးများမှာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ပေါ်လာလေသည်၊၊
ကာမအရှိန်ကြောင့် စောက်စေ့လေး သာမက ပန်းနုညိုရောင် အတွင်း နှုပ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုကပါ ဖေါင်းကား၍ ထောင်ထနေလေသည်။
ဇော်ထက် မမဝေ၏ အစေ့လေး၏ ဘေးနားလေးကို လျှာဖြားလေးဖြင့် လျှက်လိုက်သည်။ ဝေဝေတကိုယ်လုံး တုံသွားရလောက်အောင် အရသာက ကောင်းလှသည်။
နောက်တခါ ပေါင်ခြံ လေးတွေကို နမ်းပြန်သည်။
ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို နမ်းရင်း အနမ်းတွေက အဖုတ်နား ကပ်လာလိုက် ဝေးသွားလိုက် ဖြစ်နေသည်။
ဝေဝေ ဇော်ထက်ရဲ့ နှုပ်ခမ်းထူထူ တွေကို သူမ အဖုတ် ပေါ်မှာ လိုချင်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်ဆိုးလေးက အပြည့် အဝ မပေး။ သူမစိတ်တွေ မရိုးမရွ ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေသည်။
““ မမ မနေတတ်တော့ဘူး မောင်ရယ် . . . ”“
အဖုတ်ကို မထိတထိလေး နမ်းလိုက် အစေ့လေးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ထိသည် ဆိုရုံလေး ယက်လိုက် လုပ်ပေးပြီး အနမ်းတွေက ဝေးသွားပြန်သည်။
သုံးလေးခါ ဝေ့ကာဝိုက်ခါ လုပ်ပေးပြီး အတောင့်တဆုံး ဖြစ်လာအောင် နှိုးဆွပြီးမှ ဇော်ထက် အနမ်းတွေ အဖုတ်ဆီ ရောက်လာတော့သည်။
ရောက်လာတော့လဲ “ နုတုန်းကလဲ သူ ကြမ်းလာတော့လဲ သူ” လို့ ပြောရမလိုပင်။
အထဲကို လျှာကြီးထဲ့၍ ကလိပေးသည်။ အစေ့လေးကို လျှာဖျားဖြင့် ကေဝွိုက်ပြီး ယက်ပေးသည်။ အတွင်း နှုပ်ခမ်းလေးတွေကို ငုံစို့ သည်။
အပြင်နှုပ်ခမ်းသား ဖေါင်းဖေါင်းကြီးတွေကို အထက်အောက် တလျှောက် ယက်ပေးသည်။
ဝေဝေမှာ သူမ၏ စောက်ဖုတ်တခုလုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လျှက်ပေးနေသည်ကို ခံစားရင်း ကာမအရှိန်များမှာ ထိမ်းမရလောက်အောင် တရိပ်ရိပ်တက်၍သာ နေလေတော့သည်၊၊
ဇော်ထက်မှာ မဝေ၏ စောက်စေ့လေးနှင့် စောက်ဖုတ်အဝ နှုပ်ခမ်းသားလေးများကို လျှာဖြားလေးဖြင့် အချိန်ယူ၍ ကလိ ပေးနေရာ ကာမအရသာကြောင့် မဝေမှာခြေချောင်းလေးများ ကုပ်လာပြီး လက်သီးကိုလဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စုပ်ထားမိတော့သည်။
တကိုယ်လုံးလဲ ချွေးပြန်လာပြီး တဟင်းဟင်း အသံလေးထွက်၍ ညည်းတွား နေရတော့သည်၊၊
ဇော်ထက်သည် မဝေ၏ ဖင်ပေါကဝ်နားလောက်ကနေစ၍ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက်ကို
လျှာဖြင့် ပွတ်တိုက် ဆွဲပေးလိုက်ရာ မဝေမှာ မနေနိုင်တော့ဘဲ ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ဖြဲပေး မိလိုက်တော့သည်၊၊
““ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် . . . ကောင်း လိုက်တာ . . . ””
ဝေဝေမှာ ဇော်ထက်၏ ဆံပင်များထဲကို လက်ချောင်းများ ထိုးထဲ့ လိုက်ပြီး အတင်းကို ဆုပ်ကိုင် ထား မိတော့သည်။
ကာမအရှိန်ကြောင့် စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း တခုလုံးမှာလဲ အရေများဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဇော်ထက်သည် မဝေ၏ အစွမ်းကုန်ထောင်ထ နေသော စောက်စေ့လေး ပတ်ပတ်လည်ကို
လျှာဖြားလေးဖြင့် တရစပ် လှိမ့်၍ ယက်ပေးရင်း သူ၏လက်ခလယ်ကို စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဖြေးဖြေးခြင်း ထိုးထဲ့ပေး လိုက်လေသည်။
မဝေမှာ သူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲ တဖြေးဖြေးဝင်လာသော လက်ချောင်ရှည်ကြီး၏ အရသာကို ခံစားရင်း လီးရှေရှေတုပ်တုပ်ကြီးကို တမ်းတမိတော့သည်၊၊
ဇော်ထက်မှာ မဝေ၏ စောက်စေ့လေး ကိုလျှာဖြင့် ကလိပေးနေရင်း လက်နှစ်ချောင်းပူးကို စောက်ဖုတ်ထဲ မှန်မှန်ကြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေရာ ဝေဝေမှာကာမရှိန်များ တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီး နောက်ဆုံးသူမ၏ စောက်ဖုတ်ကိုကော့ကော့၍ ပေးမိတော့သည်၊၊
ဇော်ထက်ကလဲ ပိုကောင်းသထက် ကောင်းအောင် သွက်သွက်လေး ကလိပေးလိုက်ရာ မဝေမှာ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပြီး အသံထွက်၍ ညည်းတွားမိတော့သည်၊၊
အကိုင်အတွယ် ကျွမ်းကြင်လှသော ကောင်လေး၏ လက်တွင်.. ဝေဝေဘယ်လိုမှ ထိမ်းမရတော့…။
တဏှာရှိန်က အထွဋ္ဌ်အထိပ်သို့ ရောက်နေပြီ။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးညိုညို တုတ်တုတ်ကြီး ထိုးသွင်း၍ လိုးတာကို တအား ခံချင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဝေဝေ့ဆန္ဒများကို ဒုတိယအကြိမ် ဖွင့်ဟလိုက်ရပြန်တော့သည်…
””မောင်…မမ…မနေနှိုင်တော့ဘူးကွယ်… မောင့်ဟာကြီးကို အထဲမှာ လိုချင်ပြီ””
ဇော်ထက်၏ အနမ်းတွေက နေရာရွေ့လာသည်။
အစေ့လေး ကိုနမ်းနေရာက… ဆီးခုံမို့ဖေါင်းဖေါင်း..။
နောက်တော့.. ဝမ်းပိုကသ်ား ဖွေးဖွေးလေးကိုနမ်းသည်။ ထိုမှတဆင့်.. ဇော်ထက်ရဲ့ နှုပ်ခမ်းထူထူတွေက.. ဝေဝေ့ ရင်သားအစုံဆီကို ရောက်လာပြန်သည်..။ နောက်တော့..လည်တိုင်ကျော့ကျော့..
ဇော်ထက် တကိုယ်လုံးက.. ဝေဝေ့အပေါ်တွင် အုပ်မိုးနေပြီ။ သူ့ကိုယ်ခန္တာ အောက်ပိုင်းက.. ထောင်ကားထားသောဝေဝေ့.. ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ ရောက်နေသည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားထားသဖြင့်.. ဝေဝေ့အဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို.. ဇော်ထက်လိုးရန် အတွက် အဆင်သင့် ဖြဲပေးထားသလို ဖြစ်နေသည်။
ဇော်ထက်က သူ့လီးကြီးကိုကိုင်၍ စောက်ရည်များ ရွှဲစိုနေသော စောက်ဖုတ်အဝတွင် တေ့ထားလိုက်သည်၊
ဝေဝေ ပေါင်ကိုအစွမ်းကုန် ကားထားပေးပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲဝင်လာမည့် ဇော်ထက်၏ လီးကြီးကို
””အဲဒီလိုကြီး.. လုပ်မထားနဲ့.. မောင်ရယ်.. မမ..မနေနှိုင်တော့ဘူး.. ထည့်မှာဖြင့်လည်း.. ထည့်တော့…””
ဝေဝေ..ခပ်ချွဲချွဲလေးပြောလိုက်ရင်း… ဇော်ထက်၏ ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖက်လိုက်သည်။
””ဘယ်ဥစ္စာကြီးလည်း..မမ . . ”” ဇော်ထက် ကျီစယ် လိုက်သည်..
””သွား..မသိဘူး.. မောင်နော် . . . မညစ်ပတ်နဲ့ . . ””
””မောင်က ကြားချင်လို့ ပါ..မမရဲ့..””
ဇော်ထက်၏ ခါးကို.. မနာအောင် ဆွဲလိမ်လိုက်ရင်း.. ”
”မောင့်..လီးကြီး . . . . မောင့်..လီးကြီး . . . ကဲကျေနပ်ပြီလား..””
ဝေဝေ့ စကားဆုံးသည်နှင့် ဇော်ထက်သည် စောက်ဖုတ်အဝတွင် တေ့ထားသော သူ့လီးကြီးကို အထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်၊၊
လီးကြီး တဝက်ခန့် ဝင်သွားသည်။
ရုတ်တရက်မို့ လန့်သွားသော မဝေ အော်လိုက်မိသည်။
ဇော်ထက် လီးကြီးက သူမ ထင်ထားတာထက် ပိုကြီး ပိုတုတ်နေသည်၊၊
စောက်ဖုတ်ထဲတွင် လီးကြီးက တင်းကျပ်၍ နေသည်။
ကောင်လေးက ပြာပြာသလဲ မေးသည်။
””ဟင့်အင်း… ဒါပေမဲ့.. မင်းဟာကြီးက.. မမ ထင်ထားတာထက် ပိုကြပ်နေတော့.. လန့်သွားတာပေါ့…””
””ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း..”” ကောင်လေး သဘောကျသွားသည်။
ဝေဝေ့ လည်တန် သွယ်သွယ်လေးကို ငုံ့နမ်း လိုက်ရင်း အပြင်မှာ ကျန်နေသေးသော လီး ကြီး ကို ထိုးသွင်း ပေးလိုက်သည်။
လီးကြီးက… သူမ၏ ကိုယ်ထဲကို တရွေ့ရွေ့ဖြင့်.. ဝင်လာနေသည်..။
ဝေဝေ.. ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကား၍ ခါးလေးကို ကော့ပေးထားသည်။
လက်နှစ်ဖက်ကလည်း.. ဇော်ထက်၏ ကျစ်လစ်သန်မာလှသော.. တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အတင်း ဖျစ်ညှစ်ပေးထားမိသည်။ လီးကြီးက တဆုံးထိ ဝင်သွားသည်။
ဇော်ထက်က မဝေစောက်ဖုတ်ထဲ တဆုံးဝင်နေသော သူ၏ လီးကြီးကို ပြန်မထုတ်ဘဲ ဖိကပ်ထားသည်၊၊ လီးကြီးက ဝေဝေ့စောက်ဖုတ်ထဲတွင် တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်ကြီး ဖြစ်နေသည်၊၊
တယောက် သွေးခုန်တာကို တယောက် ခံစားမိနေလောက်အောင် တင်းကျပ်နေသည်။
ဝေဝေ့ ဘဝတွင် လီးပေါင်းများစွာ တွေ့ခဲ့ဘူးသော်လည်း ဒီလောက်အောင်မြင်သော လီးကြီးမျိုးနှင့် တခါမှ မတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပေ။
အဖုတ်တခုလုံး ကွဲထွက်ပြဲထွက် သွားတော့မလား ဟု.. ထင်ရ လောက်သော မခံမရပ် နှိုင်အောင် တင်းကြပ် နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်၊၊
ခံကောင်းသည် ဆိုရုံ အရသာကို အပြည့်ဝဆုံး ပေးနေသည့် တင်းကျပ် မှုမျိုး ဖြစ်သည်။
ဒီလို ကျမ်းမာရေးကောင်းသော လီး ထွားထွားကြီးမျိုးကို ဝေဝေ မျှော်လင့်နေခဲ့တာ ကြာပြီ..။
တဒုတ်ဒုတ် သွေးခုန်နေသော လီးမာမာကြီးကို ထည့်ထားရတာကိုက အရသာ အတော် ရှိနေပြီ။ လီးကြီးကို တဆုံးဖိကပ်ထားရင်း တဖြေးဖြေးခါးကို နှဲ့ ၍ ကစားပေးနေရာ ဇော်ထက်၏ ဆီးခုံပေါ်ရှိအမွှေး ပါးပါးတွေက ဝေဝေ့စောက်စေ့လေးကို မထိတထိလေး ပွတ်တိုက်မိနေပြန်သည်။
ဝေဝေက အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးပြီး တောင်းဆိုလာတော့ ကောင်လေးသည် လီးကြီးကို မှန်မှန်ကြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ရင်း ဖြေးဖြေးခြင်း စတင်၍ လိုးပေးလိုက်တော့သည်။
ဝေဝေမှာလည်း ကာမရှိန်များ တရိပ်ရိပ် တက်သည်ထက် တက်လာကာ တဟင်းဟင်း ညည်းတွားရင်း
ကောင်လေး၏ လက်မောင်းတွေကို အတင်း အကျပ် ဆုပ်ကိုင်ထားမိတော့သည်။
ဇော်ထက်က မှန်မှန်ကြီး ဆောင့်ဆောင့်၍ လိုးပေးနေသည်၊၊ မဝေကလဲ စည်းချက်မှန်မှန် စောက်ပတ်ကို ကော့ကော့ပေးသည်၊၊
ဆောင့်ချက်တွေက အား ပါလွန်း လှသည်။
လီးကြီးကကြီးသလို၊ လိုးချက်ကလဲ ပိုင်လှသည်။ အထွက်တွင် ဒစ်ပါ ထွက်သွားအောင် ဆွဲထုတ် သွားပြီး . . . အဝင်တွင် . . .
တချောင်းလုံး အရှိန်မှန်မှန်ဖြင့် ထိုးသွင်းလာပြီး ဆုံးခါနီးမှ “ဆောင့်” သွင်း လိုက်လေသည်။
မှန်မှန်ကြီး လိုးပေးနေသည့် လီးကြီးအပြင်ရောက်သွားလျှင် ဝေဝေ့ရင်ထဲ ဟာပြီးကျန်ခဲ့သည်၊၊ အဲ့လိုဆို ဝေဝေ့စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကြီး မြန်မြန်ပြနဝ်င်လာ စေချင်သည်။ လီးကြီး ပြန်ဝင်လာလျှင်တော့ ဝေဝေ ခါးကို ကော့ပေးထားရင်း ဆောင့်သွင်းလိုက်မည့် အချိန်ကို ကြိုလင့်နေမိသည်။
ဝေဝေမှာ အပျိုပေါက်ကောင်မလေး အလိုးခံရသကဲ့သို့ ထွန့်ထွန့်လူးနေပြီး မိုးသည်းနေသည့် ရာသီဥတု အေးအေးထဲမှာပင် ဇောချွေးများ ပြန်လာရတော့သည်၊၊
အားပါပါ ဆောင့်သွင်းလိုက်လို့ တဆုံး ဝင်သွား ချိန်တွင် ကိုယ်ခန္တာ နှစ်ခုကြားတွင် အဖိ ခံလိုက်ရသည့် စောက်စေ့လေးနှင့် အဖုတ်တဝိုက်ကနေ ဖြာထွက်လာသည့် အရသာ လှိုင်းများ သည် ဝေဝေ့ တကိုယ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ သွားသည်။
ဇော်ထက် လိုးတာကို ခံရသည်မှာ ကောင်းလွန်းလှသဖြင့်.. ဝေဝေမှာ.. မနေနိုင်တော့ဘဲ..
မရှက်မကြောက်ပင် အော်ဟစ်၍ ညည်းမိတော့သည်၊၊ ဆန္ဒတွေကို ဖွင့်ဟမိ တော့သည်၊၊
““ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်…. မမကြိုက်လိုက်တာ…. .ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးစမ်းပါ… မောင်ရယ်… မမကို.. အဲဒီလို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးစမ်းပါ…””
ဇော်ထက် လိုးချက်က ပိုအားပါလာသည်၊၊
လီးကြီး အဝင်အထွက်တိုင်း… လီးတန်ကြီးက.. ဝေဝေ့.. စောက်ဖုတ်နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပွတ်တိုက်နေသည်။
လီးကြီးက တချောင်းလုံး နီးပါးထွက်သွားသည်။
ထို့နောက်.. ဒစ်ကားကားကြီးက. ဝေဝေ့.. စောက်ဖုတ် အဝနှုပ်ခမ်း သားလေးတွေကို အတင်းပွတ်တိုက်၍ ဝင်လာပြန်သည်။
မအင်း လို့လဲ မဖြစ်။
ဝေဝေက တကိုယ်လုံး ချွေးတွေ ရွှဲနေပြီ။ အဖုတ် မှာလဲ အရည်တွေက ရွှဲနစ်နေပြီ။ ဖင်ကြားက နေ စီးကျနေတာကိုသိနေသည်။ အိပ်ယာခင်းမှာလဲ ရွှဲ ကွက်နေရောပေါ့။
ဝေဝေ “ အင်း ” ဆိုသည့် စကားဆုံးသည်နှင့် ဇော်ထက် လီးကြီးအပြင် ရောက်သွားသည်။ ကောင်လေး အပြင်မှာ ကွင်းတိုက်ပြီး ပြီး လိုက်မည် ထင်သည်။
““ ရတယ် မောင် . . မမ ဆေးထိုးထားတယ် ””
အရည်တွေ အထဲမှာ ပန်းထဲ့ လိုက်တာ မခံရဘဲ ပြီးတာမျိုးလောက် ဝေ့ဝေ့ စိတ် ထဲ အခံရ ခက်တာ မရှိ။
အဲ့လိုမျိုး အတွေ့ အကြုံသည် ဖီလင် အအောက်ဆုံး ဖြစ်သည်။
လိုးတယ် ဆိုတာ နောက်ဆုံးမှာ လီးကြီးကို အတင်း ဖိကပ်ထားပြီး အရည်နွေးနွေးတွေ ပန်းထည့် လိုက်မှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ဝေဝေ ယူဆသည်။
ဆန့်တငံ့ငံ့ ဖြစ်နေသော ဝေဝေ့ကို စွေ့ကနဲ ပွေ့ချီလိုက်သည်၊၊
ကောင်လေးရဲ့ လက်ထဲမှာ အရုပ်လေး တခုလို ပါသွားသည်။
အောက်ပြန်ချလိုက်တော့ ဝေဝေ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ လေးဖက် ထောက်လျှက်ကလေး၊၊ မဝေ ချက်ကနဲ သဘောပေါက်သွားသည်၊၊
ခါးလေးကိုကော့၍ ဖင်ကို နောက်ပစ် ပေးထား လိုက်သည်။
ခါးကို ကော့ပေးထား သဖြင့် စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းလေးက ပေါင်ကြားတွင် ပြူးထွက် နေသည်၊၊
ပေါင်ကိုကားထားသဖြင့် ဖြူဖွေး ဖေါင်းကားနေသော အပြင် နှုပ်ခမ်းသားလေးများက ကာမအရေများ
ရွဲပြီးပြောင်လက်နေသည်။ အကွဲကြောင်းကြားမှ အတွင်း နှုပ်ခမ်းသားလေးများကို အတိုင်းသား မြင်နေရလေသည်..၊၊
တင်နှစ်လုံးကြားမှာ ပွင့်ဖတ်လေးတွေ ညီညာလှပနေတဲ့ ခရေပွင့်လေးကို တွေ့ရတော့ အပျိုစင် ဖင်ပေါက်လေး ဖြစ်ကြောင်း ဇော်ထက် အတွေ့ အကြုံ အရ သိလိုက်သည်။
လီးကြီးကိုကိုင်၍ အဖုတ် အကွဲကြောင်း တလျှောက် ပွတ်တိုက်ပေးနေရင်း ဖင်ပေါက်ဝလေးကို အချွဲရည်လေးများဖြင့် လိမ်းကျံ ပေးနေလိုက်သည်။
ဇော်ထက် အကြံကို ဝေဝေ ရိပ်မိသလိုလို ရှိသည်။ ခွင့်ပြုရမည်လား ညင်းဆန်ရမည်လား သူ ဝေခွဲ မရ။
သည်ကောင်လေးကို ဝေဝေ လက်ဖျား ခါရသည်။
သူ မကြုံဖူးသေးတာတွေကို တခုပြီး တခု မိတ်ဆက်ပေးနေသည်။
သူမို့လို့ မရွံ မရှာ . . .
ဖင်ပေါက်လေးကို လက်နဲ့ ကလိ နေသည်။ ရင်တွေ ခုန်ရတာကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့ . .
အကွဲကြောင်း လေးကို ပွတ်ဆွဲ နေတာရပ်သွားသည်။
ခုချိန်မှာတော့ ဝေဝေသည် ဇော်ထက်ရဲ့ အရုပ်ကလေး ဖြစ်နေပြီ။ သူလိုချင်တာကို ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပင်။
အတွင်း နှုပ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုကြားတွင် ဒစ်ကားကြီးကို ထိသည် ဆိုရုံလေး ထည့်၍ တေ့ထားပြီး ငြိမ်နေသည်။ ကောင်လေး အရှေ့ အနောက် ဘယ်လမ်းလျှောက်ရမလဲ ရွေးနေပုံ ရသည်။
ဝေဝေ ကတော့ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသူ ဖြစ်သည်၊ အသစ် အဆန်း ဆို စမ်းချင်သည်။ အထူး သဖြင့်
ဇော်ထက်လို ကောင်လေး မျိုးနဲ့ ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တခုတော့ စိုးရိမ်မိသည် ဇော့် ဟာက သေးသေးကွေးကွေး မဟုတ်တော့ နာသွားမှာကိုတော့ ကြောက်သည်။
ဇော်ထက် မဝေ ဖင်ပေါက်လေးကို ကလိပေးရင်း ချိန်ဆနေသည်။ မဝေ ကတော့ ပေးတာ သေခြာ နေပြီ။
ဒါပေမဲ့သူ့မှာ အဆီမရှိ အစွတ် မပါ။ ဒီအတိုင်းကြီး ဆော်လို့ ကမဖြစ်။ ကြာကြာဝါးမဲ့သွား အရိုးကြည့် ရှောင်တာ ကောင်းသည် ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဝေဝေ့ အဖုတ် ဝတွင် တေ့ထားသော သူ့ဘော်ဒါကြီးကို အထဲသို့ ထိုးသွင်း လိုက်တော့သည်။
အတွင်းနုပ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုကြားကို ဒစ်ကြီး မြုတ်ဝင် လာသည်၊၊
နောက်တော့ ခါးလေးကိုကိုင်၍ ဖြေးဖြေးခြင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်၊၊ တဆုံး ဝင်သွားသောအခါ.. ခန
မှိန်းထားပြီး ဖြေးဖြေးချင်း. .ပြန်ထုတ် လိုက်သည်။
မှန်မှန်ကြီး လုပ်ပေးနေရင်းက အရှိန်ရလာသည်။ အထုတ် အသွင်း မြန်လာသည်။
လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက် ဖြန့်ခင်းထားပြီး မျက်နှာကို အုပ်၍ ကပ်ထားရင်း ခါးလေးကို ကော့ပေးထား သဖြင့် ဝေဝေရဲ့ နောက်ပိုင်းက ဇော်ထက် အတကွ် အကောင်းဆုံး မြင်ကွင်း ကို ရစေသည်။
လီးကြီးကို ထိုးသွင်းလိုက်လျှင် အတွင်းနှုပ်ခမ်းသား ညိုညိုလေးတွေက လီးနှင့် အတူ အထကဲို လိပ်
ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ ငုံဖူးနေသော ပန်းကလေးရဲ့ ပွင့်ဖတ်ကလေးတွေ ပွင့်အာလာသလို အပြင်ကို လန်ထွက်လာသည်။
ဝေဝေ့ အရည်တွေက ပိုပြီး ပျစ်ချွဲလာသည်။
အတံ ညိုညိုကြီး တလျှောက် အဖြူရောင် အရစ်လေးတွေက အကွင်းလိုက် အကွင်း လိုက်။
““ အား … ရှီး …. ””
ဝေဝေ့ဆီက အသံ ထွက်လာသည်။
““ ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် . . . မောင့် လီးကြီးက ကောင်းလိုက်တာ ””
ဇော်ထက် အဖို့မှာလည်း အဖုတ်ထဲကို သူ့လီးကြီး ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည့် မြင်ကွင်းအပြင်
ဝေဝေ၏ ရမက်ထန်နေသော အသံများဖြင့် ကောင်းနေပြီကို သိရသဖြင့် လိုးရတာ ပိုအရသာ ရှိလေလာလေသည်။
တိတ်ဆိတ်နေသော အိပ်ခန်းလေးထဲတွင်.. ဝေဝေ့ ခါးလေးကို ဆွဲဆွဲပြီး အသားကုန် စောင့်စောင့် လိုးလိုက်သည့် အခါ ထွက်ပေါ်လာသည့် တဖေါင်းဖေါင်း မြည်သံနှင့် သူတို့နှစ်ယောက်၏ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းတို့ကသာ ကြီးစိုးနေလေတော့သည်။
အဝင်အထွက်တိုင်း ဒစ်ကားကြီးက စောက်ဖုတ်အဝ နှုပ်ခမ်းသားလေးများကို ပွတ်တိုက်နေသလို၊ လီးတံ တုတ်တုတ်ကြီး ကလည်း စောက်ခေါင်း တလျှောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ပွတ်တိုက်နေလေရာ မဝေမှာ တကိုယ်လုံးရှိ အကြောအခြင်များ သာမက၊စောက်ဖုတ် အတွင်းရှိကြွက်သားများပါ တွန့်ရုံးသွားပြီး ကာမပန်းတိုင်သို့ ရောကရ်ှိသွားလေသည်၊၊
မောင်ဇော်ထက်မှာလဲ မမဝေ ပြီးသွားသဖြင့် တွန့်ရုံးသွားသော ကြွက်သားများကြောင့်
စောက်ဖုတ်အတငွ်းမှ သူ့လီးကိုဖြစ်ညှစ် စုတ်ယူလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် မီးကုန်ယမ်းကုန် အသားကုန် ဆောင့်ဆောင့် လိုးရင်း သုတ်ရည်များကို မမဝေ၏ စောက်ဖုတ် အတွင်း ပန်းထုတ်ပေးလိုက် လေတော့သည်၊၊
အိပ်ယာထဲတွင် နှစ်ယောက်သား မောဟိုက်နေသည်။ ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေသည်။ အပြင်မှာတော့ မိုးသက်လေပြင်းတွေ ကျနေသည်။
ဝေဝေသည် ဇော်ထက်ရင်ခွင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာ လှဲနေရင်း မိုးသည်းနေ့ကို အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ် နေမိတော့သည်။
သို့( စ )